गच्छदारलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशमा प्रधानन्यायाधिश असन्तुष्ट : न्यायाधिशको इलाम सरुवा - Kantipath.com
गच्छदारलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशमा प्रधानन्यायाधिश असन्तुष्ट : न्यायाधिशको इलाम सरुवा
बालुवाटारको सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणमा तानिएका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई धरौटीमा छाडेको दुई दिनमै विशेष अदालतका अध्यक्षसमेत रहेका न्यायाधीश प्रेमराज कार्की सरुवा भएका छन्। कार्की ८ महिनाअघि मात्रै विशेष अदालतको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा चलाएका गच्छदारलाई विशेष अदालतले गएको ३० असारमा १० लाख धरौटीमा छाडेको थियो। विशेष अदालतको उक्त निर्णयको कतिपयले आलोचना गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ। सोही असन्तुष्टि स्वरुप कार्कीलाई उच्च अदालत विराटनगर अन्तर्गत इलाम इजलासको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा काज सरुवा गरिएको हो।
अख्तियारमा मुद्दा चलेको डेढ वर्षदेखि फरार रहेका गच्छदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै अदालतमा उपस्थित भएका थिए। अदालतमा उपस्थित भएकै दिन उनलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गरिएपछि यसलाई धेरैले आशंकाको नजरले हेर्दै आएका छन्।
Previous Previous post: जसपाको विवादबारे आजदेखि सुनुवाई : उपेन्द्र पक्षको संसदीय दल र कार्यकारिणीमा बहुमत
Next Next post: नेपाल प्रहरीका डिएसपी रमेशको निधन
मासिक तलब दुई लाखसहित इजरायलमा खुल्यो जागिर : यसरी भर्नुस फर्म !
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : सीपसँगै स्वरोजगार
असईको अन्तिम नतिजा प्रकाशित
रोजगारीमा जापान जानेका लागि परिक्षा केन्द्र तोकियो, कहाँबाट हुन्छ परीक्षा ?
कोइरालाले ७० करोड ठगी
कामदार भिसामा अमेरिका जान भोलिदेखि अनलाइन दर्ता खुल्दै
२१३ जना शान्ति सेनामा गए फेरी ११५ जना पठाउने तयारी
प्रहरीको विभिन्‍न पदमा ३६० जनालाई जागिर खुल्यो